Hanti dhowraha Guud” Maamulka Gobolka Banaadir yuusan iska horkeenin Shacabka Muqdisho iyo Dowlada” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hanti dhowraha Guud” Maamulka Gobolka Banaadir yuusan iska horkeenin Shacabka Muqdisho iyo Dowlada”
3rd April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Hanti Dhawrka guud ee Qaranka Soomaaliya Dr Nuur Faarax Jimcaale, ayaa si adag uga hadlay musuq maasuq ka jira maamulka Gobolka Banaadir iyo canshuuraha gobolka oo la sheegay in lagu qaado boonooyin aan sharci aheyn.
Waxa uu sheeggay Hanti dhowraha Guud, in maamulka gobolka Banaadir uu canshuuraha ku qaado boonooyin aan aheyn mida xisaabiyaha guud , waxa uuna uga digay maamulka gobolka in ay sii socoto boonooyinka qaldan ee canshuuraha lagu qaadayo.
Hanti dhowraha Guud, ayaa xusay in maamulka gobolka Banaadir kala hadleen joojinta boonooynka qaldan ee canshuuraha lagu qaado, waxa uuna mar kale uga digay maamulka gobolka in a sii socoto isticmaalka boonooyinka aan sharciga aheyn ee Canshuuraha lagu qaadayo.
”Waxaan ka codsaneynaa Hay’aaha dowlada iyo maamulka Gobolka in la isticmaalo boonada Xisaabiyaha guud , markaad tagto Degmooyinka gobolka Banaadir waxaad arkaysaa boonooyin kala duwan oo degmooyinka laga isticmaalayo waana uga digeynaa maamulka gobolka sii socoshada arintaasi”Ayuu yiri Hantidhooraha guud.
Dr Nuur Faarax Jimcaale, oo ka hadlay Canshuuraha laga qaado guryaha kuyaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka ay si qaldan u cabiraan guryaha ayna lacago qaldan dadka uga qaadaan, isagoona uga digay maamulka in ay iska horkeenaan shacabka iyo Dowlada.
”Waxaan uga digeynaa maamulka gobolka Banaadir in aysan iska horkeynin shacabka iyo Dowlada, markaad fiiriso Yurub ,Amerika iyo wadamo badan oo caalamka kuyaala ma arag meel guri looga cabirayo balac iyo dhirr ,waa xaaran arintaasi , waxaana uga baaqayaa maamulka gobolka in si deg deg ah arintaasi u joojiyo” Ayuu yiri Hanti-dhowraha .
Hadalka kasoo baxay Hanti-Dhowraha Guud ayaa imaanaya xili maamulka gobolka Banaadir lagu eedeenayay musuq maasuq iyo wax is daba marin, waxaana qolyahan canshuraha u qabailsan gobolka lagu eedeeyaa in ay wataan boonooyin kala duwan oon qaarkood sharci aheyn.
Sawirro Jowhar: Wabiga Shabeelle oo biya keenay & faraxd ka dhalatay
Daawo Sawirada: labada bohood iyo Marooyinka oo maanta Muqdisho Boqor ku caleema saaray